Maamulka Hirshabelle oo farriin u diray wasiirrada iyo xildhibaannada ku matala DF Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maamulka Hirshabelle oo farriin u diray wasiirrada iyo xildhibaannada ku matala DF...
Maamulka Hirshabelle oo farriin u diray wasiirrada iyo xildhibaannada ku matala DF Soomaaliya
Jowhar (Halqaran.com) – Maamulka Hirshabelle ee ka dhisan Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa ugu yeeray Wasiirada iyo Xildhibaanada ku matala Dowladda Federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay soo booqdaan deegaanada ay ka soo jeedaan.
La taliyaha Qaybta Warbaahinta ee Madaxweynaha Hirshabelle Xasan Cabdulqaadir Muudey, ayaa sheegay in Xildhibaanada iyo Wasiirada laga doonayo in ay booqdaan halka ay deegaan doorashadoodu tahay.
“Xildhibaannada Labada Gole iyo Wasiirada Dowladda Dhexe nagu metela, kana soo jeeda Deegaanada Hirshabelle State waxaa laga rabaa in ay booqdaan, halkii ay deegaan doorashadoodu ahayd.” Ayuu yiri Xasan Cabdulqaadir Muudey.
“Waxaa laga rabaa in ay muujiyaan garab istaagga waajibka ku ah, waxaa laga rabaa in deegaanadeena baahiyooyinka dadkeenu ay qabaan sheegaan, waxaa laga rabaa in ay Warbaahinta Qaranka ee uu Wasiir Maareeye mas’uulka ka yahay gaarsiiyaan in aan ka mid nahay dowladnimada ka jirta dalka.” Ayuu sii raaciyay hadalkiise Mr. Muudey
Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa tibaaxay in Xildhibaanada iyo Wasiiradaba looga fadhiyo in ay fahmaan in maanta looga baahan yahay deegaanadooda, isla-markaana ay maamulka kala qayb qataan xalinta wixii khilaaf ah, ee dadkooda ka dhex jira.
“Waa muhiim in ay faham ka wada yeeshaan deegaanada ay ka soo jeedaan looga baahan yahay, waana muhiim in dadkooda wixii khilaafaad ka dhex jira ay nala xaliyaan.” Ayuu yiri Xasan Cabdulqaadir.
Isagoo xoojinayay baaqooda ku aadan xubnahaasi ayuu yiri “Waxaan markasta la wadaagaynaa in loo baahan yahay in ay uguntadaan, sidii aan u samata bixin lahayn shacabkeena oo aysan dhayalsan, waa muqadas in masuul kasta uu guto wixii loo wakiishay.”
Mr. Muudey oo warkan ku baahiyay bartiisa Facebook ayaa intaa ku daray “Shacabkeena qiimaha badan ee Hirshabelle State waxaan iyagana leeyahay ilaashada midnimadiina iyo ka shaqaynta wax kasta oo horumarin kara deegaanadeena.”
La taliyaha Qaybta Warbaahinta ee Madaxweynaha Hirshabelle Xasan Cabdulqaadir Muudey, warka ka soo yeeray ayaa ku soo aadaya, xilli ay isa soo tarayan dhaliilaha loo jeedinayo Xildhibaanada iyo Wasiirada Xukuumadda ka tirsan, ee deegaan ahaanta ka soo jeeda Hirshabelle.
Hirshabelle oo farriin u dirtay
wasiirada iyo xildhibaanada ku metala dowladda